Wasaaradda Waxbarashada oo Shaacisay Jadwalka Imtixaanka Fasalka 12-aad | Onkod Radio
Wasaaradda Waxbarashada oo Shaacisay Jadwalka Imtixaanka Fasalka 12-aad
Muqdisho (Onkod Radio) — Xafiiska Imtixaanaadka iyo Shahaadooyinka ee Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya, ayaa soo saaray jadwalka Imtixaanka Shahaadiga fasalka 12-aad ee dugsiga sare 2021 -2022, kaas oo ardayda Soomaaliyeed ay ka qaaddo wasaaraddu iyo sannad walba, laguna galo manhajka waasaarrdu diyaariso.
Wasaaradda ayaa horay u shaacisay Imtixaanka ayaa waxa uu billaaban doonaa 18ka June 2022, oo ku beegan maalin Sabti ah, waxaana uusoo gabagaboobi doonaa 22-ka, bisha maalin Arbaco ah, Jadwalkani kasoo baxay xafiiska ayaa lagu qeexay sida maaddooyinku-u-kala horreyn doonaan maaddooyinka ardaydu ay galayaan oo ka kooban 10 maaddo oo ardaydu qaadatay.
Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay sidoo kale in Imtixaanka lagu dhowaaday inuu sannadkaan baaqdo, kadib markii loo waayay dhaqaale, kadib doorashadii dalka. waxaana ay uga mahadcelisay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Xasan Shiikh Maxamuud oo wasaaraddu ku ammaantay inuu bixiyay qarashaadkii loogu talo galay in lagu fudeediyo Imtixaanka.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, ayaa lagu leeyahay lacagihii sannadkii hore ee Macallimiintii ilaalineysay Imtixaanaadka in aysan wax lacag oo xuquuqdooda ay siinin annagoo soo xigannay dhoowr Macallin oo ilaalo ka ahaa sannadkii hore iskuulladii iyo goobihii lagu galayay imtixaanaadkii Shahaadiga.